नङ टोक्ने बानी छ ? आजै बाट त्याग्नुहोस्, यस्तो खतरा रोग लाग्न सक्छ ! - नेपाली खोज
नङ टोक्ने बानी छ ? आजै बाट त्याग्नुहोस्, यस्तो खतरा रोग लाग्न सक्छ !
बिबिसी– सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’ भनिन्छ हात सफा भए कीटाणू फैलिँदैनन्। खानेकुरा बेच्नेहरूले अझ बढी हात सफा राख्नुपर्छ।
तर, यथार्थमा हुन्छ के भने हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि हातबाट ब्याक्टेरिया/कीटाणू पूर्णतया समाप्त हुँदैनन् वा भनौँ हाम्रो हात कीटाणूमुक्त हुँदैन। त्यसैले बिरामीको जाँच वा उपचार गर्दा चिकित्सक र नर्सहरू पन्जा लगाउँछन्।
बर्सेनि विश्वभर करिब ३० लाख मानिसको मृत्यु डाइरियाबाट हुने गरेको छ। सरसफाइ विज्ञहरूका अनुसार हात राम्ररी धुने हो भने तीमध्ये १० लाखको जीवन बचाउन सकिन्छ। र, हामीले आफ्ना नङ नपाल्ने र हात सफा राखे अझै धेरै जीवन बचाउन सकिन्छ। धेरै मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ। नङ कीटाणूको भण्डार भन्ने थाहा पाइसकेपछि अझै नङ टोक्नु हुन्छ?
यसरी हटाउनुस् एकै दिनमा अनुहारको नचाहिएको रौं…
पल शाह, जुना सुन्दासको अभिनयमा “झुम्का किन्दिमकि” ले बाजी मार्ने सम्भावना (भिडियो सहित)
ओझेलमा परेकी गायिका मिना श्रेष्ठको आवाज सुन्दा पक्कै पनि कोइलीको स्वर पनि फिका नपर्ला भन्न सकिदैन (भिडियो सहित)